Temporal range: Quaternary–present
Barn Owl screeches recorded in Ceredigion, Wales
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျက်စားသော ဒေသအား အစိမ်းရောင်ဖြင့် ပြသထားသည်
မိန်ငှက်သည် တီးတုတ်၊ ဇီးကွက်ငှက်များကဲ့သို့ ညဉ့်ငှက်သက်သက်ဖြစ်သဖြင့် နေ့အခါတွင် သစ်ခေါင်း၊ လိုဏ်ခေါင်းများ၌အိပ်၍ မှောင်စပျိုးသည့် အချိန်ကျမှ ထွက်ကာ တညဉ့်လုံး လိုက်လံကျက်စားသည်။ ကြွက်များကို မြေကြီးပေါ်မှ ဖမ်းယူစားသောက်သည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်ကလေးများနှင့် ငှက်ကလေးများကိုလည်း ဖမ်း၍ အကောင်လိုက် မျိုချတတ်သည်။ အတန်ကြီးသည့် ငှက်များကိုလည်း ဖမ်း၍ သတ်စားလေ့ ရှိသည်။ မိန်ငှက်သည် အစာများကို တစ်နေရာတည်း၌သာ စား၍ ထိုနေရာ၌ပင် မကြေသော အစာများကို အန်ထုတ်လေ့ရှိသည်။ အမွေးနှင့် အရိုး စသည့် မကြေနိုင် သော အစာများသည် ငှက်၏ ပါးစပ်မှ အလုံးကလေးများ အဖြစ်ထွက်လာပြီးလျှင် ခြောက်သွားသည့် တိုင်အောင်ပင် မည်း၍ ပြောင်နေသည်။ မိန်ငှက်သည် ညဉ့်အခါ စူးစူးရှရှ 'ဂစ်' ဟူသော အသံမျိုးနှင့် အော်တတ်ရာ အချို့က လူမမာသေမည့် အတိတ်ဆိုး နိမိတ်ဆိုးဟု ယူဆသောကြောင့် ယင်းကို ငှက်ဆိုးဟု ခေါ်သည်။ အချို့ကမူ 'ငှက်သူတော်' ဟု ခေါ်ကြသည်။ ထိုငှက်၏ အော်သံကို စက်တင်ဘာလမှ မတ်လအထိ ကြားရ၍ အခြားအချိန်၌ ကြားရခဲသည်။
ဒေသအလိုက် သားပေါက်ချိန် အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း၊ များသောအားဖြင့် ဒီဇင်ဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလ လများတွင် မိန်ငှက်များ သားပေါက်တတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် အသိုက်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အုတ်နံရံခေါင်းတွင် ဖြစ်စေ၊ ရေတွင်းနံရံခေါင်းတွင် ဖြစ်စေ၊ သစ်ခေါင်းတွင် ဖြစ်စေ တွေ့နိုင်သည်။ အသိုက်ဟု ဆိုရသော်လည်း စားကြွင်းစားကျန်များ၊ အန်ဖတ်များ စုပုံနေသော နေရာမျှသာဖြစ်သည်။ ကျနစွာ ပြုလုပ်ထားလေ့ မရှိချေ။ တမြုံလျှင် ၄ ဥမှ ၇ ဥအထိ ရှိသည်။ ဥများသည် ဖြူ၍ ချောပြီးလျှင် လုံးသယောင်ယောင်ရှိသည်။ မိန်ငှက်ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ကား ကွင်းပြင်များ၌ နေသည်။
↑ BirdLife International (2019). "Tyto alba". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22688504A155542941.en. |volume= / |doi= mismatch
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လင်ကောင်ပိုး&oldid=720384" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။